Ny rindranasa tsara indrindra hahitanao asa amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ao anatin'ny fotoan-tsarotra amin'ny asa isika, indrindra ho an'ireo tanora izay mitantana betsaka amin'ny finday sy rindrambaiko amin'ny ankapobeny, izany no antony Androany izahay dia te-hitondra ho anao compilation ny sasany amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra izay hanampy anao hahita asa avy amin'ny iPhone. Mihamaro ny orinasa mampiasa an'ity karazana vavahady asa nomerika ity hanakarama matihanina amin'ny sehatra rehetra, ary tsy misy zavatra mora kokoa noho ny fisafidianana tolotra sy ny fisoratana anarana miaraka amin'ny tohotrao avy amin'ny sofa ao an-trano, izany no antony hamakafakantsika ireo rindranasa mahaliana ireo .
Raha fintinina, ity compilation ity dia hanolotra safidy hafa anao ary holazainay aminao ny antsipiriany sasany izay mampiavaka ireo fampiharana ireo amin'ny sisa amin'ireo ao amin'ny iOS App Store, ny sasany mifototra amin'ny traikefa ary ny hafa mifototra amin'ny atiny atolotray. Ary angamba ny fomba sy fahalalana hananana fihetsika mavitrika amin'ny fikatsahana asa dia tsy azon'ny rehetra. Satria, andao handeha any miaraka amin'ity fanangonana ity manantena izahay fa hanome anao ny valiny tadiavinao rehefa mitady asa amin'ny fotoana sarotra be ary manan-danja tokoa ny fikasana rehetra.
1 Infojobs - Ilay Mpanjaka any Espana sy Italia
3 ASA ANIO
Infojobs - Ilay Mpanjaka any Espana sy Italia
Infojobs dia nanamboatra ho avy mampanantena, nanampy olona an'aliny maro tany Espana sy Italia hahita asa, ary Ity sehatra ity dia misy ny SME sy ny orinasa lehibe isaky ny sehatra, azonao atao ny mangataka asa any Garrigues, EY, ary na dia Deloitte aza tsy misy ezaka be loatra.
InfoJobs - Asa sy asamaimaim-poana
Izy io koa dia manana ny fanarahan-dia ny CV anay, izany hoe ho azonao jerena rehefa novakian'izy ireo ny CV anao ary fantany eo noho eo raha voafantina na nariana ny ekipan'ny Human Resources an'ny orinasa ianao. Izy io dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo safidy tsara indrindra izay hitantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny iOS App Store ary ilay iray manamora kokoa anao any amin'ireo firenena roa voalaza. Manana fampidirana mahery ao anatin'ny tontolo iainana ankehitriny izy ireo ary nilaza izy ireo fa nanolotra asa maherin'ny 900.000 nandritra ny 2016.
Iray amin'ireo rindranasa malaza indrindra tato ho ato raha ny momba ny fikarohana asa ao amin'ny iOS App Store no ahitantsika dokambarotra maro na amin'ny fahitalavitra na amin'ny haino aman-jery an-tsoratra. Ary i Jobandtalent no nilaza fa nametraka olona 4.800 XNUMX fotsiny tamin'ity volana febroary ity. Maimaimpoana ihany koa ity fampiharana ity ary misy koa ny geolocation, sivana amin'ny alàlan'ny fahaizany manokana sy ny fianarana, ary koa fanontana tonga lafatra amin'ny fandaharam-pampianarantsika.
Solony mahaliana iray hafa izay manana isa tsara ao amin'ny iOS App Store ary maimaimpoana tanteraka, zavatra tsy tokony ho adino, satria raha mitady asa ianao, ny zavatra farany tadiavinao dia ny handany vola amin'izany, sa tsy izany?
ASA ANAO: Mpitady asamaimaim-poana
Iray amin'ireo rindranasa malaza indrindra azontsika jerena ao amin'ny iOS App Store, ny fampielezana ny fahitalavitra azy dia niditra lalina ihany koa tamin'ny dokambarotra mampiavaka azy. Ao koa ny rafi-pitantanana ny karama rehefa voafantina isika, na izany aza, ny zava-dehibe eto dia ny fitadiavana asa.
Maimaimpoana tanteraka i JOBTODAY ary manana chat sy rafi-pifandraisana amin'ireo rindranasa ao anatin'ny 24 ora, tsy mila miandry ela loatra ianao vao hahalala raha voafidy ihany ianao na tsia. Aleo tsy vita ny marina. Maimaimpoana tanteraka ary voadika amin'ny teny espaniola, frantsay ary anglisy.
Ny farany amin'ity lisitra ity dia ny kely malaza nefa tsy ny mahomby indrindra, ny safidy rehetra dia tsara rehefa mitady asa. Hanana fampandrenesana mavitrika amin'ny fikarohana asa izahay, noho izany dia tsy maintsy mifidy ny sivana sy ny safidintsika fotsiny isika.
Ho fanampin'izany, manana fampidirana tsara amin'ny rindranasa LinkedIN izy io, noho izany dia ho mora ny fisoratana anarana sy ny famenoana ny fandaharam-pianarantsika, na izany aza, mety ho vitsy kokoa ny fampiharana noho ireo telo teo aloha satria io no kely indrindra amin'ireo izay misy.
Fantatrao ve ny fampiharana fikarohana asa bebe kokoa? Ampahafantaro anay ao amin'ny boaty fanamarihana na ao amin'ny Twitter!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny rindranasa tsara indrindra hikarohana asa amin'ny iPhone-nao
Ny tweak BioProtect dia nohavaozina ary manohana ny iOS 10 izao